Fanambarana ny talen'ny komisionan'ny Vondrona afrikanina momba ny toe-javatra any Afrika atsimo
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afrika Atsimo » Fanambarana ny talen'ny komisionan'ny Vondrona afrikanina momba ny toe-javatra any Afrika atsimo
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Afrika Atsimo • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny Lehiben'ny Vaomieran'ny Vondrona afrikanina, Moussa Faki Mahamat
Moussa Faki Mahamat dia manameloka amin'ny fomba mahery vaika ny firongatry ny herisetra ao Kwazulu-Natal, Gauteng ary ny faritra hafa any Afrika Atsimo.
Ny Lehiben'ny Filoha dia manolotra ny fiaraha-miory amin'ny fianakavian'ireo niharam-boina ary naniry ny hanasitranana haingana ireo naratra
Ny filoham-pirenena dia mitaky famerenana amin'ny laoniny ny filaminana, ny fandriam-pahalemana ary ny fitoniana eto amin'ny firenena amin'ny fanajana feno ny lalàna velona.
Ny filoha dia mamerina ny firaisankina feno sy tsy miovaova ao amin'ny Vondrona afrikanina
Kaomisiona miaraka amin'ny governemanta sy ny olona atsy Afrika Atsimo.
Ny Lehiben'ny Vaomieran'ny Vondrona afrikanina, Moussa Faki Mahamat, dia manameloka amin'ny fomba mahery vaika ny firongatry ny herisetra izay niafara tamin'ny fahafatesan'ny olon-tsotra sy ny fisehoan-javatra mampivarahontsana tamin'ny fandrobana fananam-bahoaka sy tsy miankina, fanimbana fotodrafitrasa, ao anatin'izany ny fampiatoana ireo serivisy ilaina ao Kwazulu-Natal, Gauteng sy ny faritra hafa atsy Afrika Atsimo.
Ny Lehiben'ny Filoha dia manolotra ny fiaraha-miory amin'ny fianakavian'ireo niharam-boina ary naniry ny hanasitranana haingana ireo naratra.
Ny filoham-pirenena dia mitaky famerenana amin'ny laoniny ny filaminana, ny fandriam-pahalemana ary ny fitoniana eto amin'ny firenena amin'ny fanajana feno ny lalàna velona. Notsindriany fa ny tsy fanatanterahana izany dia mety hisy fiatraikany lehibe tsy eto amin'ny firenena ihany fa amin'ny Faritra iray manontolo.